Attention Fadlan akhri xijisay / Attention Veuillez lire avant de musawir
Attention Fadlan akhri xijisay / Attention Veuillez lire avant de musawir sano 3 4 bilood ka hor #131
Kusoo dhawow Rikoooo Forum for FSX/FSX Daabacaadda Steam.
Fadlan ogow, in golahani yahay Ingiriisi, oo kaliya Ingiriis ayaa halkan looga hadlaa.
Mid ka mid ah Faransiiska, fadlan halkan tag: www.rikoooo.com/fr/forum/
****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** ************************
Bienvenue sur le forum Rikoooo ku shub FSX / FSX Daabacaadda Steam.
Notez que ce forum ku saabsan sida loola dhaqmo, iyo si aad u aragto: www.rikoooo.com/fr/forum/
(Turjumaad google ah haddii ay khalad tahay iyaga)
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray Gh0stRider203.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.202